AUSTRIA VIENA VS AC MILAN: Shaxda & safafka ay caawa fiidkii kusoo geli karaan! – Gool FM
AUSTRIA VIENA VS AC MILAN: Shaxda & safafka ay caawa fiidkii kusoo geli karaan!
(Viena) 14 Sebt 2017 – Kooxda AC Milan oo lagu galay kulankii ugu dambeeyay ee horyaalka Talyaaniga oo lagu dhadhansiiyay guuldarradii ugu horreeysey ee rasmi ah fasal-ciyaareedka 2017-18 ayaa caawa marti u ah kooxda Austria Viena oo ay dheelayaan kulan ka mid ah EL.
Dhanka Viena: Kooxda Frink: Waxaa boos isku haya laba joog oo kala ah Klein-De Paula iyo Serbest-Lee. Wuxuuna ciyaari doonaa shaxda 4-2-3-1 oo ah mid weerar xigeen ah.
Dhanka Milan: Milan waxay u badan tahay inay caawa kusoo shaqa tagto shaxda 3-5-2 oo u fasirmaysa 3-4-1-2 taasoo uu Calha ka dheelayo lambarka buuxa. Waxaa Milano looga tegey Rodriguez, Borini iyo Conti oo dhaawac yar qava. Weerarka waxay u badan tahay Kalinic iyo André Silva.
32 PENTZ, 23 DE PAULA, 25 SALAMON, 24 BORKOVIC, 21 LEE, 2 GLUHAKOVIC, 9 FRIESENBICHLER
30 STORARI, 22 MUSACCHIO, 2 CALABRIA, 18 MONTOLIVO, 5 BONAVENTURA, 8 SUSO, 63 CUTRONE
Almer, Demaku, Grunwald
Conti, Gomez, Rodriguez, Borini
Guardiola oo mid ka mida xiddiggaha City ku tilmaamay in uu ku jiro kuwii ugu fiicnaa ee uu abid leyliyo
Kooxaha Real Madrid & Barcelona oo iskula dheggan Maxime Lopez